Infographics အတွက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လမ်းညွှန် | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 30, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
မင်းစဉ်းစားနေတာနောက်တစ်ခုငါသိတယ် infographic? စောင့်ပါ။ ငါအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်တိုင်းကိုမကြာသေးမီကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Infographics မှာဘာကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားလာရတာလဲလို့သင်စဉ်းစားမိရင် Voltier Creative မှလူများကသင်လုပ်နိုင်သည်…သင်ရပြီ…ဒါကိုရှင်းပြတဲ့ Infographic! ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် infographics ကိုတီထွင်ပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။
Voltier ကို Creative အားဖြင့် Created သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်
Voltier ကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ သော့ချက် Infographic အသုံးပြုသွားမည်ဘယ်လို၌တည်ရှိ၏။ သင်သည်သူတို့၏ site ကိုဖော်ပြထားသောသူတို့၏ site ကိုမှ link ကိုသတိထားမိပါသလား သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်? ၎င်းသည် Voltier တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးလိုသောသော့ချက်စာလုံးဖြစ်သည်။ Infographic ကို site မှ site တစ်ခုသို့ထုတ်ဝေသည်နှင့်ထို keyword အတွက် backlinks ထုတ်ဝေသည်။ ၎င်းသည် Voltier ၏မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သောသော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်ရှာဖွေမှုကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်!
၎င်းသည်လှလှပပအလုပ်လုပ်သော SEO နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်သော်လည်း, ဖျောပွရကျိုးနပ်တစ်ခု Infographic စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ Infographics သို့သွားသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အချိန်ကုန်ပြီးစျေးကြီးသည်။ သငျသညျတစျခုလုပ်တာပေါ့လျှင်, သင်ကအကောင်းဆုံးရေတွက်ပါစေ။ ကောင်းမွန်သောသုတေသနပြုပြီးကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးစျေးနှုန်းအတွက် Infographic လျှင်စျေးနှုန်း ၃ ဒေါ်လာကျော်အထိရှိသည်။
Google Benchmarks အရေးပါသလား။
31:2017 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 40
ဒါက infographic ဒီဇိုင်းတစ်ခုရဲ့ စံနမူနာကောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုပါစို့။ နေရာတကာမှာ ရှိတယ် LOL
သြဂုတ် 1, 2017 မှာ 11: 16 AM